Qarax lagu fashiliyey Galkacayo
25 Apr 25, 2012 - 9:46:57 AM
Ciidamada Amaanka gobolka Mudug ayaa gacanta ku dhigey maanta 25,April 2012 nin watey gaari walxaha qarxa ay ku raran yihiin gudaha magaalada Galkacayo ee xarunta gobolkaasi.
Taliyaha booliska Gobolka Mudug Col.Jaamac Axmed Maxamuud oo shir saxaafadeed warbaahinta ugu qabtey Saldhiga Dhexe Galkacayo oo ka waramay ninkani iyo qaraxa ay la soo qabteen,
Ciidamada amanka gobolka ayuu shegey inay feejigan yihiin ,waxana uu raaciyey in hawlgalkan dadweynuhu ka qayb-qaatey oo soo sheegey ninkan oo ay horey uga shakiyeen.
Wadashaqayn dhexmarta lamaha amaanka dowladda iyo dadweynaha ayuu sheegey taliyuhu inay lagamaarmaan tahay sidii loo xoojin lahaa nabada iyo xasiloonida Galkacayo ka jira.
Taliyaha booliska Mudug waa ka gaabsadey su’’aal ahayd ninkani inuu ka mid yahay kooxda Al-shabaa iyo inkale oo uu ku micneyey in baaritaanku maray heerarkiisi koowaad.
Dadka ayuu kula dardaarmey inay la soo socodsiiyaan laamaha amanka cidi ay ka shakiyaan iyo inay ka feejignaadaan nafsadooda.
Tan iyo markii fariisimo badan koonfurta Somalia lagala wareegey kooxda Al-shabaab ayaa waxa soo baxayay wararka sheegaya inay u soo guureen deegaanada Puntland islamarkaasina doonaanayaan inay ku dhuumaaleystaan buurlayda Galgala oo horey lagu soo afjarey maleshiyaadkii Atam.